गाइन्जूलाई श्रीलंकामा नागरिक वीरता स्वर्ण पदक « प्रशासन
काठमाडौं । नेपाली नागरिक लक्ष्मीसुन्दर गाइन्जू श्रीलंकामा ‘नागरिक वीरता स्वर्ण पदक’द्वारा सम्मानित भएका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी सर्वसाधारणको उद्धार गरे बापत गाइन्जूलाई सो पदकद्वारा सम्मानित गरिएको हो । गाईन्जूले उक्त दिन भक्तपुरको जेँला टोलमा भूकम्पले घर भत्किएर च्यापिएका आठ परिवारका २१ जनाको जीवितै उद्धार गरेका थिए । उनी भूकम्पपछि निरन्तर पीडितको सेवामा खटिँदै आएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा मनोनयनकर्ताका तर्फबाट विशेष रुपमा आमन्त्रित डा. दिनेशराज भुजुले नेपालमा आएको भूकम्प र त्यतिखेर स्वयंसेवी युवाले पूर्याएको थुप्रै उदाहरण भएको बताए । “गाइन्जू ती असल र हिम्मति युवाहरुको प्रतिनिधि पात्र हुन्,” उनले भने ।